News - စုစုပေါင်းဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းမှတ်စုများ
ချုံ့ထားသောရေဖြင့်ဖိအားပေးသောလေသည်အဆုတ်အစိတ်အပိုင်းများပျက်ယွင်းခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ filter မလုပ်မီ၊ လေမှခြောက်စက်များ၊ condensate traps များတပ်ဆင်သင့်သည်။
3. condensate ရေနုတ်မြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
condensate သည် air filter ကိုထုတ်လွှတ်ရန်မေ့သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် condensate သည်ဘက်နှစ်ဘက်မှစီးထွက်လာပြီး pneumatic အစိတ်အပိုင်းများပျက်ယွင်းသွားသည်။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အခက်အခဲများရှိပါကအလိုအလျောက်ရေနုတ်မြောင်းဖြင့် filter ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ဓာတုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည့်လေထုဖိအားများ၊ အော်ဂဲနစ်အရည်များ၊ ဆားများ၊ တဖြေးဖြေးစားသောဓာတ်ငွေ့များပါဝင်သောဒြပ်ဆီသည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အရေးယူခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
၅။ Air filter ကိုတပ်ဆင်သင့်သည်
အဆို့ရှင်၏အထက်ပိုင်းအခြမ်းနှင့်နီးကပ်သော, filter ကိုအောက်ပါ5μမီတာ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအဘို့ကိုတပ်ဆင်ရပါမည်။
၆။ အအေးခံပြီးနောက်၊ လေမှုတ်စက်နှင့်ရေစုပ်စက်စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
လေထုအတွင်းရှိလေထုအတွင်းရှိ compressed air များသည်အဆို့ရှင်နှင့်မကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှု၏အခြားအအေးပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ ဦး တည်သည်။ ထို့ကြောင့်အအေး၊ လေမှုတ်စက်နှင့်လေမှုတ်စက်တို့ပြီးလျှင်ဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ်စနစ်ကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။
၇။ အဆို့ရှင်၏အထက်ဘက်ခြမ်းတွင် Toner နှင့်အခြားအဖြစ်အပျက်များသည်ဆီအခိုးအငွေ့ separator ကိုသတ်မှတ်သင့်သည်
လေဖိအားတစ်ခုမှထုတ်ပေးသော toner သည်အဆို့ရှင်နှင့်တွဲဖက်ပါကအဆို့ရှင်သည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
လေထု၏အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များအသေးစိတ်ကိုကုမ္ပဏီ၏“ compressed air purification system” တွင်ကြည့်ပါ။
elastic တံဆိပ်ခတ် solenoid အဆို့ရှင်, ဆီတခါ, ရေနံစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ရပါမည်။
တာဘိုင်အမှတ် ၁ (ထပ်ထည့်ခြင်း) VG32 ISO ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ချောဆီကိုအပြင်, အဆို့ရှင်ချွတ်ယွင်းစေ, etc ..
တိပ်တံဆိပ်ခတ်၏ 11. အကွေ့အကောက်များသောနည်းလမ်း
ပိုက်နှင့်ပိုက်ပူးတွဲသည်ချိတ်ဆက်ထားသောအခါသမယတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းပိုက်နှင့်ရောနှောထားသောအမှုန့်အမှုန့်ပိုက်ချည်နှင့်အပျက်အစီးများကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းမပြုရ။ တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်တိပ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါတံဆိပ်ချည်၏ရှေ့ဆုံးကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်တိပ်ပတ်ပတ်လည်တွင်မဖုံးရန်ချည် ၁ ချောင်းဖြင့်ဘေးဖယ်ထားသင့်သည်။
ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ရေ၊ ရေ၊ ရေငွေ့ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်အထက်ပါအရာများနှင့်အတူနေရာများတွင်မသုံးပါနှင့်။
13. IP65 နှင့် IP67 (IEC60529 ကို အခြေခံ၍) ထုတ်ကုန်များ (ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေ) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်ပါ။ ဖုန်နှင့်ရေပေါ်တွင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ သို့သော်ရေတွင်အသုံးမပြုနိုင်, အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
၁၄။ IP65 နှင့် IP67 ထုတ်ကုန်များနှင့်အညီတပ်ဆင်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏မှတ်စုများကိုဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။
၁၅။ လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့၊ ပေါက်ကွဲနိုင်သောဓာတ်ငွေ့လေထုကိုမီးနှင့်ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်ရှောင်ကြဉ်ရန်။ ဒီထုတ်ကုန်တွင်ပေါက်ကွဲမှုမှကာကွယ်ပေးနိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံမရှိပါ
17. နေထိတွေ့ရာအရပ်, အကာအကွယ်အဖုံးကိုထည့်သွင်းသင့်နေရောင်ကိုဖုံးလွှမ်း။
၁၈။ အပူအရင်းအမြစ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ အပူဓါတ်ရောင်ခြည်သည်ရပ်သင့်သည်။
၂၀။ Control cabinet တွင်တပ်ဆင်ထားသော solenoid အဆို့ရှင်သည်အခါအားလျော်စွာပါ ၀ င်သောအပူချိန်အကွာအဝေးရှိ solenoid အဆို့ရှင်အားခွင့်ပြုရန်အပူအတိုင်းအတာကိုယူသင့်သည်။
22. အိပ်ဇောမှချခြင်းနှင့် compressed လေကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းများ
ဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အရာဝတ္ထုကိုမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုမှုတွင်၊ အစိတ်အပိုင်းများကိုရြ။ ထို့အပြင်တံဆိပ်ခတ်သို့မဟုတ်ဆိုင်းထိန်းပုံစံအဆို့ရှင်၏အလယ်တွင်ရှိသည့် ၃ ခု၊ ကျန်ရှိနေသည့် compressed air ကြားရှိအဆို့ရှင်နှင့်ဆလင်ဒါတို့ကိုလည်းဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်။
အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက်နုန်းဖယ်ရှားရေး၏အမြန်စွန့်ပစ်မှုကိုကာကွယ်ရန်အစရှိသည့် pneumatic actuator ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ပြီးနောက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုအတည်ပြုရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆို့ရှင်ရွေ့လျားမှုကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ၊ အဆို့ရှင်သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းတစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးလေထု၏အရည်အသွေးကိုဂရုပြုပါ။
manual လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ device ကိုလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုသင့်သည်။